The nsogbu ndị mmụọ ọjọọ ndị agha bụ eziokwu
Ugbu a, m chọrọ ịgba àmà kasị njọ ahụwo m na okwu nke nsogbu ndị mmụọ ọjọọ na agha.
The nsogbu ndị mmụọ ọjọọ ndị agha bụ eziokwu nke na-esite mmụọ ọjọọ ụwa. Live Kraịst, dị ka Onyenwe anyị nwere mmụọ ntule onyinye mgbe obi a nsogbu. M nnọọ mwute na mmụọ m na pụrụ ịgba akaebe otú m na-enweta ihe a onu.
Ọ bụrụ na m na-aga na obodo, m na-ezute a onye nwere a oyi na ọkụ spirit n'ime ya. Mgbe ahụ, m na-eche dị ka ya "na-afụli" na-adịghị ọcha ka m si na onye.
The abụghị - ma ọ bụrụ na m na-ezute a onye a softening afụli a iyi nke uto si onye.
Mmụọ ọjọọ na ike nke na-aba n'anya karama
M mgbe ụfọdụ na-arahụ gabiga Systembolaget na mara ndị mmụọ ọjọọ ike breather si mmanya karama. Amakwa m nke ndị mmụọ ọjọọ na ike nke na-emepụta sịga ọkụ.
Mgbe e nwere a mkpari usoro ọcha na TV na-afụli nādighi ọcha agha megide m. Ya mere dịghị mgbe m njọ ma na-ebibi ihe.
Na mmemme schedules tupu akụkọ na-emekarị na-ọcha nke pụrụ unyi mkpụrụ obi m na Jizọs na-asa na ya dị oké ọnụ ahịa na ọbara. Ya mere, m na-emechi anya m ma jide ya ntị iji zere ịhụ na-anụ olu ha.
M na-eche arọ metal music mmụọ ọjọọ, karịsịa mgbe e nwere Setan ọcha. Ọ dịghị mgbe m na-ege ntị dị otú ahụ "music", n'ihi na m na-eche ya otú mkpari. M na-eme bụghị dị ka oké nkume music n'ozuzu. Ma, anụrụ dị otú ahụ ma na-achọ ya.
Ụfọdụ oge gara aga, m bi na a ebe ịnyịnya ígwè ndị ohi na ndị na-aga. Ezuru m bike, nke m guzobere n'èzí ụlọ ebe m bi. Ọ bụrụ na m na-echeta n'ụzọ ziri ezi, ndị ígwè na-ekpochi, ma ka na-zuru.
Onye nyere m ndumodu gaa Ndị mmadụ Park, n'ihi na nke ndị mmadụ na-eji na-ahapụ zuru anyịnya igwe.
M rubere isi Council gaa park ịchọ ígwè m. M wee gburugburu na-achọ n'ebe nile. Entertainment The ihe ahụ biri na ndị mmadụ hapụrụ ogige, ma m chere na ike na mmụọ m na mmụọ ọjọọ nwayọọ. M nwetara dị otú ahụ ihe eerie ikuku.
M ga-enwe ike ịga na a sinima, na naa omume, egwuregwu ihe ma ọ bụ ndị ọzọ ntụrụndụ venues. M ga-ndị dị otú ahụ a ruru unyi na mkpari ikuku na m tachiri obi ruo-ahụ.
The kasị njọ ahụwo m
Ugbu a, m chọrọ ịgba àmà kasị njọ ahụwo m na okwu nke nsogbu ndị mmụọ ọjọọ na agha. M nwetara n'èzí na na Vasaloppet na Mora ụlọ.
The Vasaloppet ulo bu bytardagar nke Vasaloppet agịga. People eji nọdụ ala n'ebe na mgbanwe, na-azụ ahịa na-ere ha. My nwunye ụfọdụ na ọ na-aga na-ere, otú ahụ ka m ya gaa Vasaloppet ulo. Ọbụna dị ka anyị guzoro n'èzí n'ọnụ ụzọ ụlọ ahụ, m chere na echiche, 'Gịnị a mkpari na ọnọdụ na-enwe Mmeri ebe a. "
Mgbe ahụ, anyị wee banye owuwu ụzọ mbata, ebe ọ na obi na-adịghị ọcha, mkpari ikuku ike.
Ke Re bụ a ụlọ ebe ndị gbanwere ha agịga nọ ala na tebụl ha. Anyị gara ala n'ebe na hụrụ na e nwere ọtụtụ ndị mmadụ n'ebe ahụ, onye chọrọ ka ha agịga.
Ndị mmụọ ọjọọ na-agha bugara kwupụta m
Mgbe anyị banyere ụlọ adara ndị mmụọ ọjọọ ndị agha megide m nnukwu ike. Ọ dị ya ka onye di ike, onye kewapụrụ m azụ. M dị ihe ida ya nguzo na ihe fọrọ nke nta dara.
Ma mgbe ahụ, kwụpụ Mmụọ Nsọ ke dike ike n'ime m, dị ka a counterweight megide mmụọ ọjọọ na agha. M chere na weliri na-ebu site na Mmụọ Nsọ.
Mmụọ ọjọọ ụwa
Anyị bụ ndị na-echekwa nwere mmụọ ụwa na-alụ ọgụ megide. Ya ike bụ ihe ọ bụla na na na. M na n'ezie ike na-enweta. Ị nwere na-jupụtara na Mmụọ Nsọ na-ebi ndụ nke ọbara Jizọs nke nchebe-chebere.
Jizọs meriri ike nke ihe ọjọọ. Ọ akawo na disarmed ndị na-achị ihe ọjọọ alaeze. Ọ zọpiawo isi agwọ ahụ bụ na mere ekwensu ike ọ bụla. E nwere a okwu Chineke, nke na-ewusi anyị obi ike na-eweta nkasi obi:
"Ezigbo ụmụ, ị na-si na Chineke na-emeri ha, n'ihi na ọ bụ onye nọ gị ka ya ukwuu nke di na uwa" (1 Jon. 4: 4).